जागिरका लागि आवेदन दिनुअघि यसरी बनाउनुस् बायोडाटा
काठमाडौं– जागिरका लागि आवेदन दिँदा बायोडाटा आवश्यक हुन्छ । बायोडाटाकै माध्यमबाट कम्पनीले आवेदकको योग्यता जाँच्छ । आन्तरिक छनोट प्रक्रियामा पनि बायोडाटाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
धेरै मानिस कम्पनीलाई प्रभावित गर्न भन्दै लामो बायोडाटा लेख्छन् । तर, करिअर काउन्सेलरहरु भने केवल एक पेजको बायोडाटा बनाउन सुझाब दिन्छन् ।
किन एक पेजको बायोडाटा ?
व्यावसायिक बायोडाटा लेखकहरुको अनुभवमा आवेदक अनुभवी भए पनि, नभए पनि जागिरका लागि छनोट हुन एक पेजकै बायोडाटा काफी छ । अचेल बायोडाटा इमेलबाट पठाउने ट्रेन्ड छ । धेरैजसो मानिस इमेल अट्याचमेन्टमा पहिलो पेज मात्रै पढ्न रुचाउँछन् ।
यदि तपाईंले लामो बायोडाटा लेख्नुभयो भने त्यो पढिने सम्भावना न्यून रहन्छ । त्यसैले पनि बायोडाटा एक पेजकै हुनु राम्रो । तर, आर्टिस्ट, डिजाइनर वा एकेडेमिक अनुसन्धानकर्ताको बायोडाटा भने अलि लामो हुन सक्छ ।
यसरी तयार गर्नुस् बायोडाटा
बायोडाटाको पहिलो ड्राफ्ट तयार गर्दा आवश्यक सबै जानकारी समेट्नुस् । पहिलो ड्राफ्टमा आफ्ना सबै अनुभव, सीपहरु जागिरका लागि कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पनि उल्लेख गर्नुस् । जुन जागिरको लागि आवेदन दिने हो, त्यससँग जोडिएका तथ्य मात्र उल्लेख गर्नुपर्छ ।
बायोडाटा सहजै पढ्न सकिने गरी बनाउस् । यसका लागि कम्तीमा ०.५ को पेज मार्जिन राख्नुपर्छ । अक्षरको आकार (अंग्रेजी फन्टमा) ११ राख्नुपर्छ । बायोडाटा बनाउँदा जर्जिया, एरियलजस्ता कमन फन्ट प्रयोग गर्नुस् । सबैभन्दा माथि आफ्नो नामसँगै इमेल र फोन नम्बर राख्न भुल्नुहुँदैन ।
लाइनहरुको बीचमा उपयुक्त खाली स्थान र बुलेट पोइन्ट राख्नुस् । यसले पेजको खाली भाग र कन्टेन्टबीच सन्तुलन बनाउँछ । बायोडाटालाई आफ्नो नामसहित पिडिएफ फाइलमा सेभ गर्नुहोस् ।
र, अन्त्यमा बायोडाटाको प्रिन्ट निकाल्नुहोस् । एकपटक आफैँ बायोडाटा नियाल्नुस् र सोच्नुस्, के यो बायोडाटाले रिक्रुटरलाई प्रभावित गर्छ ? रिक्रुटरले औसतमा एउटा बायोडाटालाई ६ सेकेन्ड मात्रै समय दिन्छन् । यसको अर्थ, उनीहरुले प्रायः बायोडाटाको माथिल्लो हिस्सा मात्रै हेर्ने गर्छन् ।